Asa vaovao Smart | safidy
Fantatrao ve ny asanao ho malemy fanahy? Ny tena zava-dehibe dia, hoy ilay filozofa sosialy Frithjof Bergmann. Ny vaovao mahafaly: Misy endrika fandaminana vaovao izay tian'ny olona hiasa sy hahomby.
ny Alexandra Binder 21. Septambra 2019, 8: 00 9.2k Views
"Raha jerentsika akaiky dia miankina amin'ny fanaraha-maso ny rafitry ny orinasa misy antsika ankehitriny. Ny vaovao fandaminana modely fa mifototra amin'ny fahatokisana - amin'ny fahatokisan-tsaina manan-tsaina. "
Frédéric Laloux amin'ny asa vaovao
"Rehefa sendra mangatsiaka ianao, dia mahazo mahazo aina amin'ny zava-misy fa tsy rehefa andro vitsivitsy dia amin'ny herinandro niasa amin'ny alarobia mazàna."
Frithjof Bergmann mahay mametraka fanontaniana sarotra amin'ny fampitahàna manaitra. Mijaly ve ilay olona miasa? "Eny, mijaly isika", hoy ny filozofa sosialy Austro-amerikana, "indrindra fa ny fahantran'ny faniriana miparitaka. Ny tsy fahaizana maneho ny faniriana sy hahatanteraka ireo tetikasa manokana. Tsy latsa-danja amin'izany antony izany, mifikitra amin'ny asa izay tsy vitan'ny hoe miantoka ny fivelomantsika fotsiny isika, fa eo amin'ny toerana misy antsika eo amin'ny fiaraha-monina ihany koa - na dia tsy mahomby aza izy ireo. Ary manenina be loatra izahay raha manary azy ireo. "
Nitory i "Bergmann" hitadidy ny zavatra tena ilaintsika ary "ary efa namorona foto-kevitra efa zahana tsara ao amin'ny 1980, ao anatin'izany ny governemanta: asa vaovao. Mifototra amin'ny andry telo. Ny fahafoizan-tena, ny asa ahazoana aina mahazatra ary ny asa izay mahafinaritra indrindra dia asa. Amin'ny toe-javatra tsara indrindra, mandany ny ampahatelon'ny andaniny ny olona.
Asa vaovao: manomboka any Flint mankany Einhorn
Bergmann 1984 nanao ny andrana voalohany tamin'ny fampiharana teo amin'ny tanàna Flint amerikana monoconstred. Farafahakeliny iray, isaky ny fianakaviana no niasa tao amin'ny orinasa General Motors ', izay tsy mitombo ny telo-polo isan-jato isan-taona, ary maro kokoa ny lainga. Raha tokony nandroaka ny antsasaky ny mpiasa izy dia nanolo-kevitra i Bergman fa raha miasa amin'ny orinasa mandritra ny antsasaky ny herintaona ny mpiasa dia ampiasao ny ampahany hafa mba hananganana asa vaovao. - famolavolana teny manokana. Ny fijanonan'ny ora fiasana dia mijanona tsy misy karama. Tsy najanona anefa ny 1986, noho ny tetik'asa mifandray amin'ny olona 5.000. Na dia misy valiny azo tanterahina aza - ny mpiasa iray nanokatra studio yoga, ny iray kosa nanoratra boky, fa ho an'ny ankamaroany dia mihoatra ny vokatry ny tahotra fa tsy ny fahaverezan'ny vola azo amin'ny asany ihany, izany hoe hanonerana ny fanoloran-tena ho azy ireo.
Na dia tsy nifarana aza ny foto-kevitr'i Bergmann tamin'izany fotoana izany, ary izany dia mbola loharanom-tsindrimandry ho an'ny mpandraharaha eran'izao tontolo izao: "Amin'ny asa sy orinasa maro dia efa lasa tanterahana ny fangatahako hanao izay tena tiantsika. Ampahany amin'ny kolontsaina orinasa io. Faly be aho fa niova ity, "namintina ny 87, 2018, efa XnUMX, efa lohataona ity lohataona ity. Raha ny marina, dia mihamitombo ny isan'ny orinasa manatanteraka Ny asa vaovao amin'ny fomba fiasa manokana. Ireto misy indroa voatonona roa fotsiny, ny tamba-jotra Xing 2018 fifandraisana Xing izay manavaka amin'ny volana martsa: Ny consult consult management Intraprenor dia mamaritra ny fahombiazana amin'ny fahalalahan'ny farany ny mpiasa rehetra, mba hahafahan'ny mpiasa mitondra ny fahaiza-mamorona amin'ny fomba tsara indrindra. Ny fandraisana anjara amin'izany dia misy ny herinandro efatra sy ny sabotsy ara-potoana fahavaratra. Einhorn, orinasa tanora izay mivarotra kapaoty vegan maharitra ao anaty fonosana endrika mpamorona, dia nanao tranga nandresy lahatra tamin'ny fomba iray feno, izay ny mpiasa no misafidy ny asany manokana, ny karama ao amin'ny vondrona dia voafaritra ary tsy misy fetra mandritra ny andro tsy ampoizina.
Asa vaovao: Ao anatin'ny holografia
Ny orinasa iray izay miaina koa ny New Work amin'ny fomba manokana dia i + m cosmetics voajanahary. Ao amin'ny lalana mankany amin'ny Holokratie - teny iray noforonin'ny hólos grika tranainy ho an'ny "rehetra" sy "kratie" ho an'ny "fanjakazakana". Io dia mifandraika amin'ireto rehetra ity amin'ny fahalalahana mifidy ary an'ny mpiasa rehetra "Lehibe" Jörg von Kruse nanazava hoe: "Zava-dehibe ny mahatakatra fa io modely io dia tsy avy amin'ny teoria fa mamolavola organika any amin'ny toerana maro na amin'ny orinasa maro izay manandrana fanamboarana samy hafa." Fitoviana mifandraika amin'ny holokrasia. na fandaminana fivoarana aza dia misy, ny fitarihan-tena, ny fahaizan-tena ary ny dikan'ny evolisiona. "Orinasa iray tsy noheverina ho milina intsony fa mahatakatra ho toy ny zavamananaina velona izay miara-miasa ny sela ary amin'ny ankapobeny dia ao anaty fifanakalozana na fanovana miaraka amin'ny tontolo iainany ary izay miankina aminy no miankina amin'izany."
Ny andraikiny amin'ny maha-bosotra azy? Lehibe ny fiovana. "Mandra-pahatongan'ny fampidirana ny fitarihan-tena, dia manodidina ny 50 isan-jaton'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Tena nihena be izao izao, satria ny fanapahan-kevitray miasa izao aza. "Avy amin'ny fitarihany no lasa andraikitra sy asa fanohanana bebe kokoa, avy amin'ny toetra mifehy azy, amin'ny fitokisana. "Ny asako dia ny famoronana toe-javatra tsara, izany hoe ny fametrahana rafitra sy fanapahankevitra izay mamolavola fitarihan-tena sy manatsara ny fotoana handraisan'ny mpiasa amin'ny toetrany manontolo."
Raha ny marina, Jörg von Kruse dia nahazo aingam-panahy avy tamin'ilay mpiara-miasa taloha teo amin'i McKinsey Frédéric Laloux, ankoatry ny hafa. Izy ankehitriny dia iray amin'ireo mpisava lalana amin'ny endrika vaovao misy fandaminana izay misy antony manosika ny mpiasa ary mpanoratra ny fototry ny asa "Reinventing Organizations". Momba ny fitantanana ny tena ho toy ny fitsipika mifehy, hoy izy, "Misy ankehitriny ny fikambanana misy mpiasa an'arivony izay miasa tanteraka tsy misy fanoloran-tena hiasa amin'ny mpanara-maso na CEO. Mety ho toa adala izany, fa ny fomba fiasa sarotra ihany - eritrereto ny atidohantsika na ny tontolo iainana voajanahary - miasa. "Ny atidoha olombelona, ​​hoy izy, dia ny sela 85 miliara. Tsy misy amin'izy ireo ny Tale Jeneraly, ny sela hafa izay mino fa mpikamban'ny birao izy ireo no miteny hoe: 'Eh ry zalahy raha manana hevitra tsara ianao dia alefaso amiko aloha'. "Raha toa ianao ka nanandrana mampiofana ny atidoha amin'io fomba io dia tsy mandeha intsony io. Ka tsy ahodina ny fahasarotanao. Izay no mahatonga ny rafitra sarotra rehetra mifototra amin'ny fitantanana ny tena, eritrereto ny ala, ny vatan'olombelona na ny taova rehetra. "
Mpilalao avo sy mpiasa roa
Saingy ny fitantanana ny tena dia tsy mila mpiasa manokana? Ity fanontaniana ity dia matetika nanontanian'i Mark Poppenberg, mpanorina ny intrinsifyme - tanke fisainana ho an'ny tontolon'ny asa vaventy. Tsy te handray andraikitra, hoy izy ireo. Poppenberg dia manana ny heviny mazava momba izany: "Na iza na iza mahita orinasa orinasa manana foibe nentin-drazana avy ao anaty dia mahalala: misy lalao faharoa. Ny tena lalao, mba hiteny. Izay misy ny tena asa. Saingy tsy afaka ny tsy raharahanao ny tontolon'ny tsikombakomba miaraka amin'ny tsimatimanota, satria niaviany tao anaty rafitra ofisialy, izay misy ny fahefana. Mety hisy fiantraikany lehibe ny fanafarana azy ireo. "Ary noho izany, ny mpiasa amin'ny orinasa mandeha amin'ny fomba mazàna mandeha amin'ny tsenambola dia hahita fa voatery ho lasa mpandraharaha roa izy ireo. Ka tsy misy asa vaovao. "Mampiseho fihetsika mifanaraka amin'ny fanantenana ao amin'ny sehatra eo amin'ny sehatra ofisialy izy ireo, ary mandritra izany fotoana izany dia manome fihetsika mamaha olana eo amin'ny sehatra tsy ara-potoana." Manongam-bidy roa, raha tsy mila miaina amin'ny korontana tsy tapaka izy, dia ho hita ny tena tanjony. "Ny fananana mpiasa amina orinasa iray aorian'ny Taylorist dia alefa mora kokoa. Miasa amin'ny toetran'ny olombelona mahazatra izy. Tsy mila mianatra ny famoronana hierarchy voajanahary, ny fizarana asa mora, ny fianarana mifototra amin'ny olana ary fiteny tsy mahazatra. Nahavita izany ireo olona nandritra ny am-polony taona maro. Izany no fomba nidirantsika teto amin'izao tontolo izao. Avelanao handeha fotsiny izahay. "
INFO: Toro lalan'ny fikambanana evolisiona
Fitarihan-tena - Tsy misy hierarchie ary tsy misy marimaritra iraisana. Ny mpiasa dia mandray ny fanapahan-kevitra ilaina rehetra.Ny fitaovana no ilaina dia omen'ny mpanorina orinasa. Izy koa no mamorona ireo rafitra izay misy fomba toy izany.
Fahatsoram-po - eken'ny olona amin'ny faritra rehetra ny tenany. Ho fanampin'ny saina dia misy ihany koa ny toerana ho an'ny lafiny ara-pihetseham-po, intuitive sy ara-panahy.
Ny hevitry ny evolisiona - Ny evolisiona mivoatra dia mivoaka avy ao aminy. Ny foto-kevitra taloha handinihana ny ho avy, avy eo mametraka tanjona ary mifehy ny dingana tokony ho tonga ao, avelao izy ireo. Izay alehan'ny fampandrosoana dia tsy mazava foana fa mila manaraka ny tena toetran'ny fikambanana.
taorian'i Frédéric Laloux
Nosoratan'i Alexandra Binder
Previous article Misfits - manohitra ny mainstream
Lahatsoratra manaraka Munich - Ny olona ao ambadiky ny afisy